It is me. Ko Niknayman.: September 2007
နစ်နေမန်းဘလော့နှင့် ပိတ်ထားသောအခြားဘလော့များ ၀က်ဆိုဒ်များအား ဒီကနေတစ်ဆင့်ခံပြီး ၀င်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
နစ်နေမန်းဘလော့အား ဒီကနေတစ်ဆင့်ခံပြီး ၀င်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Posted by Ko Niknayman at 8:45 PM Links to this post
ပြည်တွင်းမှ ကြည့်ရှုခွင့် မရရန် နအဖမှ နစ်နေမန်းဘလော့နှင့် ဆုံစည်းရာ ဘလော့တို့ အား ban လိုက်ပါကြောင်း။
ယခုလို နအဖအနေဖြင့် သတင်းနှင့် မီဒီယာ လွတ်လပ်ခွင့်၊ ပြည်သူများမှ လွတ်လပ်စွာ ရေးသားဖေါ်ပြခွင့်တို့ အား တားဆီးပိတ်ပင်ခြင်းသည် အခြေခံလူ့ အခွင့်အရေးအား အလွန်အကျူးဖေါက်ဖျက်ကျူးလွန်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြင်းထန်စွာရှုတ်ချလိုက်သည်။နအဖထင်သကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့ဘလော့များအား ပိတ်လိုက်ခြင်းဖြင့် မြန်မာပြည်ပြည်သူလူထုလှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာ သတင်းများ ရပ်တန့် သွားလိမ့် မည်ဟုလည်းကောင်း၊ ပြည်သူလူထုအနေဖြင့် မိမိတို့ သဘောထားများအား တင်ပြစရာ မရှိတော့ဟု ထင်ခြင်းသည်လည်းကောင်း လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ မှ မှန်ကန်စွာ ဖြစ်ပေါ်နေသော ပြည်တွင်းလှုပ်ရှားမှုသတင်းများအား ရသည့်မည်းလမ်းများဖြင့် အင်တာနက်မှဖြစ်စေ အခြားသောနည်းလမ်းများမှဖြစ်စေ ဆက်လက် တင်ပြ သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
Posted by Ko Niknayman at 8:33 PM Links to this post
သာသနာရေးဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်သူရ မြင့်မောင်မှ နာယကသံဃာတော်ကြီးများ ကိုမဟုတ်တာ တွေလျှောက်ပြော ပြီးတိုင်တည်ကာ လိမ်ညာသွားပါတယ်။
သံဃာနာယကဆရာတော်တွေကိုလျှောက်ပြီး ဓမ္မစက်ဖြင့်ဆက်လက်အရေးယူမည်ဟုပြောပြီး၊ သံဃာတော် ကြီးတွေကိုအကြံဥာဏ်တောင်းခံတော့ နာယကသံဃာတော်ကြီးတွေက ၀ိနည်းစည်းကမ်း တွေကို ပြန်ပြောပြပါတယ်။ ဒီတော့ ဒီကိစ္စကို ဘယ်လို ကိုင်တွယ်ရမလဲ လို့မေးတယ်။
နာယကသံဃာတွေကဘာမှပြောစရာမရှိတော့ဘူးလို့ပြောတော့ ဓမ္မစက်ဖြင့်ဆက်လက် အရေးယူမည်ဟု ဗိုလ်ချုပ်သူရမြင့်မောင်က အတင်းပြောသွားပါတယ်။ အခုလိုလမ်းပေါ်မှာလျှောက်တာ ၀ိနည်းနဲ့မညီဘူးလို့ပြောပါတယ်။ ပြီးတော့အခုလမ်းလျှောက်နေတာသံဃာတော်ဦးရေဟာ အားလုံးရဲ့(၂)ရာနုန်း ပဲရှိတယ် လို့ပြောပြီး၊
ပဲခူးကြခတ်ဝိုင်းကျောင်းတိုက်မှာလည်း NLD ၅၀ ဦးနဲ့သံဃာတွေကကျောင်းကိုရေသန့်ဗူးနဲ့ပစ်လို့ မှန်တံခါးတွေ ကွဲသွားတယ်လို့လဲစွတ်စွဲပါတယ်။ အဲဒီလိုပြုလုပ်ရင် ရဟန်းသည် သင်္ဃန်းရုံတာပဲရှိပြီး ရဟန်းမမည်လို့ပြောပြီး ထို့ပြင် သံဃာတစ်ပါမှထိုသို့ပြုမူလျှင်ကျန်သံဃာများပါအကျုံးဝင်သည်ဟု လိမ်လည်ပြောဆိုသွားပါတယ်။
သံဃာနာယကဆရာတော်ကြီးတွေကိုတောင် ဘုန်းကြီးစာချလုပ်ပြီး လက်ရှိ အေးချမ်းစွာ ဆန္ဒပြနေတဲ့ ရဟန်းံဃာတော်တွေကို စွပ်စွဲပြောဆိုကာ တိုင်းပြည်ကို လိမ်ညာသွားပါကြောင်း။
Posted by Ko Niknayman at 10:38 PM Links to this post
Posted by Ko Niknayman at 6:18 AM Links to this post
Posted by Ko Niknayman at 6:13 AM Links to this post
ဘုန်းဘုန်းတို့ ပြောထားတာလည်း မမေ့ကြပါနဲ့ ဦး။ ဒီညလုပ်ဖို့-
အဆင့်(၁)။ အချင်းချင်း မေတ္တာဓာတ်များ အားနည်းနေသောနိုင်ငံအားမေတ္တာဓာတ်များ အားကောင်းလာ စေပြီးငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းဖြစ်ကြစေရန် -
၂၀၀၇ ခုနှစ်။ စက်တင်ဘာလ(၂၃)ရက်နေ့ည (၈)နာရီမှ စတင်ကာ မိမိတို့အိမ်ပေါက်ဝ၊ ကျောင်းပေါက်ဝ၊ ၀ရန်တာများသို့ ထွက်ကာ (လူအချင်းချင်းနှိပ်စက်ခြင်း၊ ကင်းရှင်းကြပါစေ၊
တို့ မေတ္တာစွမ်း၊ ကမ္ဘာလွှမ်း အေးချမ်းကြပါစေ) ဟူသောမေတ္တာပို့ စာနှစ်ပိုဒ်ကို (၈နာရီ ၁၅မိနစ်အထိ) (၁၅) မိနစ်တိတိ မိသားစုလိုက်၊ ကျောင်းတိုက်လိုက် ညီညီညာညာ သံပြိုင်ဖျဖျရွတ်ဆိုကြပါရန်။
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သံဃာ့တပ်ပေါင်းစုအဖွဲ့ ကြီး။
Posted by Ko Niknayman at 6:07 AM Links to this post
Posted by Ko Niknayman at 6:05 AM Links to this post
Posted by Ko Niknayman at 10:30 AM Links to this post
Posted by Ko Niknayman at 1:32 AM Links to this post
Posted by Ko Niknayman at 1:21 AM Links to this post
ဒီမှာ downloadလုပ်ပြီး နိုင်ငံတကာရှိ မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများနှင့် မြန်မာမိသားစုများသို့ ဖြန့် ဝေပေးပါ။
အာဏာရှင် သက်တမ်းရှည်လေ.. ကိုယ့်သားသမီး ကျွန် ပိုဖြစ်လေ။
မန္တလေးတိုင်း မြင်းခြံမြို့တွင် အာဏာပိုင်များကပ်လှူသော ယမန်နေ့နံနက်အာရုံဆွမ်းကို သံဃာတော်များဆွမ်း ဘုံးမပေးပဲငြင်းပယ်ခဲ့ကြသည်။မြင်းခြံမြို့နယ်ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းက ဦးဆောင်ပြီး ကိုးဆောင်ကျောင်း တိုက်တွင် ယမန်နေ့ ဆွမ်းကပ် လှူ ဒါန်းရာ သံဃာတော်အပါး ၃၅၀ အတွက် ပြင်ဆင်ထားသော်လည်း အပါး ၅၀ သာ ကြွရောက် ဆွမ်းစားကြကြောင်း ရဟန်းတော် တစ်ပါးက မိန့်ကြားသည်။ “အဲဒါကတော့ ဟုတ်ပါတယ်။ ဆွမ်းကပ်တာကတော့ ခ၀တ၊ မ တ ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးတို့ပေါ့လေ။ အဲဒီ အဖွဲ့ကပါပဲ။ အပါးသုံးရာလောက်ကတော့ မစားဘူး၊ မလာဘူး။ ငါးဆယ်လောက်ပဲ ရှိပါတယ်။ ”
ယခုလ ၅ ရက်နေ့ ပခုက္ကူမြို့တွင် သံဃာတော် အပါး ၅၀၀ ကျော် စီတန်းလှည့်လည်ကြွချီပြီး ဆုတောင်း မေတ္တာ ပို့သသည်ကို အာဏာပိုင်များက သေနတ်ဖြင့် ပစ်ဖောက်တားဆီးပြီး အကြမ်းဖက်သည့်နည်းဖြင့် သံဃာတော် များကို ကြိုးကွင်းဖြင့် ပစ်ဖမ်းမှု၊ ဓာတ်တိုင်တွင် တုပ်နှောင်၍ ရိုက်နှက်မှု၊ သင်္ကန်းအတင်းချွတ်ပြီး ဖမ်းဆီးချုပ် နှောင်မှုများကို ကျူးလွန်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ကံအကျိူးကို ပေးဆပ်ရမည်ဟု သံဃာတော်တပါးက မိန့်သည်။ “သံဃာ စော်ကားတာဆိုတော့လည်း ဒကာကြီးရယ် လောကက ကိုယ်ကိုးကွယ် ဆည်းကပ်နေတဲ့ ဒီ သံဃာကို စော်ကားတာဆိုတော့ ဘယ်ကောင်းပါ့မတုံး။ လောကလည်းမကောင်း၊ သံသရာလည်းမ ကောင်း၊ လူကြား လို့ လည်းမကောင်း။ ဟုတ်လား။ ပစ္စုပ္ပန် သံသရာ နှစ်ဖြာလုံး မကောင်းတဲ့အလုပ်။ ရှက်လည်းရှက်စရာ ကောင်းသေး။ ယိုသူမရှက် မြင်သူရှက် ဆိုသလိုပါပဲ။ ဒါကတော့ မလုပ်သင့်ပါဘူး။ မလုပ်သင့် မလုပ် ထိုက်တာတွေ လုပ်တော့လည်း သူ့ထိုက်သင့်အားလျှော်စွာ လုပ်တဲ့ ကံကတော့ ပေးရမှာပေါ့။”ဟု မိန့်ကြား သည်။ ပခုက္ကူ သံဃာတော်အပေါ် အကြမ်းဖက် ကျူးလွန်ခဲ့မှုကြောင့် စစ်အစိုးရအား သံဃာတော်ကို ၀န်ချ တောင်း ပန်ရန် သံဃာအဖွဲ့များ စုပေါင်းထားသော မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သံဃာ့အဖွဲ့ချုပ်ကယနေ့ ၁၇ ရက်နေ့ တွင် နောက်ဆုံးထား ၀န်ချတောင်းပန်ရန် တောင်းဆိုခဲ့ပြီး မလိုက်နာပါက ပတ္တနိက္ကုဇ္ဇန ကံဆောင် သပိတ် မှောက်မည်ဟု ကြေ ညာချက် ထုတ်ပြန်ထားသည်။
Posted by Ko Niknayman at 7:10 PM Links to this post
Posted by Ko Niknayman at 3:36 PM Links to this post
ဟင်္သာတ သံဃာများ အစာအဆိပ်သင့်
ဧရာဝတီတိုင်း ဟင်္သာတမြို့တွင်သံဃာတော် အပါး၂၀၀ ခန့်အစာအဆိပ်ဖြစ်သောကြောင့် ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်၍ ဆေးကုသမှု ခံယူရကြောင်းသိရှိရသည်။ ၀ါတွင်း စနေ ဆွမ်းပတ်လောင်းလှူသောအဖွဲ့မှ ဟင်္သာတမြို့ရှိ သံဃာ တော်များအတွက် လောင်းလှူသော ဆွမ်းဟင်းကို ဘုန်းပေးပြီးနောက် ယခုကဲ့သို့ သံဃာတော်များ အစာအ ဆိပ်ဖြစ်ရသည်ဟု ဟင်္သာတမြို့ မိုးကောင်း ကျောင်းတိုက်မှပဉ္ဖင်းတပါးကပြောသည်။ဆွမ်းဟင်းမှာငါးသလောက် ပေါင်း နှင့် ငါးကြော်နှပ် ဖြစ်ကြောင်း သိရ သည်။
ဦးပဉ္ဖင်း လည်းဖြစ်တယ်၊ ရင်ဘတ်တောင့်ရုံလောက်ဖြစ်တာ၊ မနေ့က ဖြစ်ဖြစ်ချင်းတော့ စိုးရိမ်ရတဲ့ သံဃာ ၂၄ ပါး ဆေးရုံ ပို့လိုက်ရတယ်၊ မစိုးရိမ်ရတဲ့ ကျန်တဲ့ သံဃာ အပါး ၁၀၀ ကျော်ကိုတော့ ကျောင်းမှာပဲ ဆေးရုံက လာ ကု ပေးတယ်"ဟု အထက်ပါ ဦးပဉ္ဖင်းက ပြောသည်။
အဆိုပါ မိုးကောင်းကျောင်းတွင် သံဃာအပါး ၅၀၀ ခန့်ရှိပြီး စနေနေ့က ယင်းသံဃာအား လုံး ဆွမ်းဘုန်း ပေးခြင်းဖြစ် ကြောင်း၊ တခြားသော အမတသာရီကျောင်း၊ဘုရားကြီးကျောင်းစသည့်ကျောင်းများမှ သံဃာတော် တချို့လည်း အစာအဆိပ်ဖြစ်ပွားကြောင်း မိုးကောင်းကျောင်း ဦးပဉ္ဖင်းကပြောပြသည်။
ယင်းသံဃာတော်များကို လောင်းလှူသော ဆွမ်းဟင်းမှာ ရန်ကုန်မြို့မှ လာရောက်လှူဒါန်းသော ဆွမ်းဟင်း ဖြစ်ပြီး ယခုကဲ့သို့ အစာအဆိပ်ဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းရင်းကိုမူ အသေအချာမသိရသေးကြောင်း ဒေသခံတစ်ဦး ကပြောဆို သည်။
ယနေ့အခြေအနေအရ စိုးရိမ်ရသောသံဃာ ၃ ပါး ခန့် ဆေးရုံတွင် ဆက်လက်၍ဆေးကုသမှု ခံယူနေရပြီး ကျန် သံဃာများ ဆေးရုံမှပြန်လည်ဆင်းခွင့်ရပြီဖြစ်သည်ဟုလည်း ဆိုသည်။
Posted by Ko Niknayman at 11:09 AM Links to this post
Posted by Ko Niknayman at 8:06 PM Links to this post
Posted by Ko Niknayman at 9:41 AM Links to this post
Posted by Ko Niknayman at 11:38 PM Links to this post
နိုင်ငံရေးဆိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ နေ့ စဉ်နှင့်အမျှ လူ့ လောကတွင်ကြုံတွေ့ နေရသော ကိစ္စပင်ဖြစ်သည်။ တနည်းအားဖြင့်ဆိုသော် နိုင်ငံရေးဆိုသည်မှာ လူ့ ကိစ္စဟုဆိုရပေမည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ၏ စားမှု၊ သောက်မှု၊ နေမှု၊ ထိုင်မှု၊ သွားမှု၊ လာမှုအစုစုတို့ သည် နိုင်ငံရေးပင် ဖြစ်ပေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ သည် နိုင်ငံရေးကို မဆင်မချင် မတွေးတောမိစေကာမူ နိုင်ငံရေးသည် ကျွန်ုပ်တို့ နှင့် အမြဲဆက်နွယ်နေပေသည်။ နိုင်ငံရေးကိုရှောင်ရှားစေကာမူ ကျွန်ုပ်တို့ နှင့် အမြဲဆက်နွယ်နေပေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ၏ အိမ်၊ ရုံး၊ အလုပ်ရံတို့ တွင် နေ့ စဉ်နှင့်အမျှ နိုင်ငံရေးကိုပင် လုပ်နေကြရ၏။
ထို့ ကြောင့် မြန်မာပြည်သူများအနေနှင့် နိုင်ငံရေး (၀ါ)နိုင်ငံအရေးအတွက် လူတိုင်း တစ်ဦးချင်းစီတိုင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်။ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်လည်း နိုင်ငံသားတစ်ဦး အနေဖြင့် ၀တ္တရားရှိသည်။ ထိုသို့နိုင်ငံအ တွက် ပါဝင် ဆောင်ရွက်ခြင်း အားလည်း နှောင့်ယှက်တားဆီးပိတ်ပင်ခြင်း မရှိအပ်ပေ။
တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်စီမံခန့် ခွဲသော အုပ်ချုပ်သူမှသာလျှင် နိုင်ငံရေးလုပ်ရမည် မဟုတ်။ နိုင်ငံအတွင်း မှီတင်း နေထိုင်သော နိုင်ငံသားတစ်ဦးချင်းစီတိုင်း လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
နိုင်ငံအကျိုးကို ဆောင်ရွက်သော (၀ါ)နိုင်ငံရေးကို ဆောင်ရွက်သော နိုင်ငံသားသာလျှင် နိုင်ငံတော်အပေါ်သစ္စာ စောင့်သိရာ နိုင်ငံသားစစ်စစ် ဖြစ်ပေသည်။
နိုင်ငံအကျိုးကို လစ်လျူရှုသူနှင့် နိုင်ငံဆိုးကျိုးကိုဆောင်ရွက်နေသောသူသည် (အုပ်ချုပ်သူပင်ဖြစ်စေကာမူ) နိုင် ငံတော်၏ သစ္စာဖောက်ဖြစ်သည်။
ထို့ ကြောင့်နိုင်ငံသားတိုင်း မိမိတို့နိုင်ငံအရေး (၀ါ)နိုင်ငံရေးကို နိုင်ငံအကျိုး အတွက်ထမ်းဆောင်ကြပါရန်တိုက် တွန်း လိုက်ရပါသည်။
Posted by Ko Niknayman at 9:41 PM Links to this post
သံဃာတော်များ၊ ၈၈-မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ နှင့် ပြည်သူလူထုအပေါ် မတရားအကြမ်းဖက် ဖိနှိပ် နေသည့် စစ်အစိုးရအား ကန့် ကွက်သည့်အနေဖြင့် သံပုံးတီး ဆန္ဒပြပွဲများ ရန်ကုန်မြို့လူနေရပ်ကွက် အတော်များများ တွင် ယမန်နေ့ ည (၁၁၊ ၉၊ ၂၀၀၇) ၇ နာရီ မိနစ် ၂၀ တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။
ယနေ့ (၁၂၊ ၉၊ ၂၀၀၇)ရန်ကုန်မြို့ တွင်ရပ်ကွက်တိုင်း ရပ်ကွက်တိုင်းရှိ ကြံ့ဖွတ်များနှင့် စွမ်းအားရှင်များမှ တအိမ် တက်ဆင်းလိုက်လံပြီး သံပုံးမတီးခတ်ရန်သတိပေးပြောကြားလျက်ရှိပြီး၊ သံပုံးတီးပါကတီးသည့်အိမ်ကိုတက်ဖမ်း မည်ဟု ခြိမ်းခြောက်မှုများ ပြုလုပ်လျက်ရှိပါသည်။
ထို့ အပြင်ယမန်နေ့ ကသံပုံးတီးခဲ့သည့်အိမ်များရှေ့ တွင်၎ယောက်တစု၊ ၅ယောက်တစု လူခွဲစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှု လျက်ရှိပါသည်။
သံပုံးတီးဆန္ဒြပရန် ပြည်သူ လူထုအား နေ့ စဉ် မြန်မာစံတော်ချိန် ည၇ နာရီ မိနစ်၂၀ တွင် တကြိမ်၊ နှင့် ည ၈ နာ ရီ မိနစ် ၂၀ တွင် တကြိမ်။ စုစုပေါင်း ၂ ကြိမ် တီးခတ်ကြပါရန်နှင့် သံပုံးတီး ဆန္ဒြပပွဲကို သီတင်းပါတ် တပါတ် (၇ -ရက်) တိုင်အောင် ပြုလုပ်ကြဖို့တိုက်တွန်း နှိုးဆော်ထားပါသည်။
Posted by Ko Niknayman at 4:59 AM Links to this post
မမေဓါဝီအား လေးစားဂုဏ်ပြုပါတယ်။ အမှန်ကို လက်မခံတဲ့ နအဖကို ရှုတ်ချပါတယ်။
မမေဓါဝီ၏ ရေးသားမှုအား လေးစားဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့်၎င်း မမေဓါဝီနှင့် ပြည်တွင်းဘလော့ဂါအချို့အားနအဖ မှ မတရား အကြောင်းမဲ့ ခေါ်ယူစစ်ဆေးခြင်းကို ကန့် ကွက်သောအားဖြင့်၎င်း ယခု `မြင်သမျှ ဘ၀င် မကျ၊ ရင်ဝ မသက်သာ´ ဆောင်းပါးကို နစ်နစ်မန်းမှ မိမိသဘောဖြင့် ပြန်လည်တင်ပြခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။
ကာယကံရှင်များအား အန္တရာယ်မပြုရန်နှင့် နစ်နေမန်း (niknayman@gmail.com) ထံ သိက္ခာရှိစွာဖြင့် တိုက် ရိုက် ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
စောစောစီးစီး ဒီကနေ့ထုတ် သတင်းစာကို ဖတ်လိုက်မိပြီး စိတ်ထဲ ကလိကလိ ဖြစ်လာတာနဲ့ ဒီစာကိုရေးလိုက်မိ ပါတယ်။ သတင်းစာရဲ့ နောက်ကျောဖုံးမှာ မြင်သာ ထင်သာအောင် ပွိုင့်ကြီးကြီး စာလုံးမည်းကြီးနဲ့ ပြူးနေ အောင်ရေးထားပြီး ဘောင်ခတ်ထားတာမို့လည်း မြင်မိ ဖတ်မိသွားတာပါ။ ကျော်မင်းလူ (ရွှေပြည်သာ) ရေးတဲ့ “နှစ်ဘက်မျှမှ အဖြေလှမည်”ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးဖြစ်ပါတယ်၊
သူ့ဆောင်းပါးပါ အကြောင်းအရာနဲ့ အချက်အလက်တွေ အားလုံးဟာဘ၀င်မကျစရာတွေချည်း ပြည့်နှက်နေပါ တယ်။ အဆိုးဆုံးက အခုမြင်ရတဲ့ အောက်စာပါ အကြောင်းအရာပါပဲ။
ရယ်စရာလည်း ကောင်း၊ ဒေါသဖြစ်စရာလည်း ကောင်းလွန်းပါတယ်။ နိုင်ငံတော် အစိုးရနဲ့ပြည်သူပြည်သားဟာ မိဘနဲ့သားသမီးဆိုပြီး သူမို့လို့ ရေးရဲတယ်။ကဲ …ကျမတို့ အခုလက်ရှိအစိုးရ (အစိုးရပဲဆိုပါတော့။ တကယ်တော့ အစိုးရလို့မသုံးနှုန်းသင့်ပါဘူး။အာဏာကိုမတရားသိမ်းပိုက်ထားတဲ့အာဏာရှင်ဟာပြည်သူလူထုက တင်မြှောက် ရွေးချယ်ထားတဲ့ အစိုးရမှ မဟုတ်ဘဲ။ ထားပါတော့)အစိုးရဟာ မိဘဖြစ်သင့်သလား။ စဉ်းစားကြည့် ရအောင်ပါ။
ကိုယ့်မိဘကိုယ် ဘယ်သားသမီးက ရွေးချယ်ခွင့်ရှိပါသလဲ။ မိမိရဲ့ ကံတရားအရ ဒီအမိရဲ့ ၀မ်းထဲရောက်လာရ တာ မဟုတ်လား။ ကိုယ့်အမေအဖေဟာ လူကောင်း လား၊ လူဆိုးလား၊ ရုပ်ချောလား၊ ရုပ်ဆိုးလား၊ ပိုက်ဆံချမ်း သာလား၊ ဆင်းရဲလား ဘယ်သားသမီးက ရွေးချယ်လို့ရမှာလဲ။ ကိုယ့်ကံကြမ္မာအရ ဒီအမိ ဒီအဖထံကိုရောက်လာ ကြရတာမဟုတ်လား။
အစိုးရဆိုတာကတော့ ပြည်သူလူထုက ရွေးချယ်ခွင့်ရှိပါတယ်။ နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ အစိုးရဆိုတာ ပြည်သူလူထုကို အကျိုးပြု နိုင်မယ့်လူမျိုးသာ ဖြစ်ရမယ်။ ဒီလို လူမျိုးကိုသာ ပြည်သူတွေက အစိုးရအဖြစ် ရွေးကောက် တင် မြှောက် ကြတာပဲ။ တိုင်းဖျက် ပြည်ဖျက်တွေကို အစိုးရအဖြစ် ဘယ်သူက လက်ခံကြမှာလဲ။ အခုလို ပြည်သူ လူ ထုရဲ့စိတ်ကြိုက်မဟုတ်ဘဲမိမိသဘောနဲ့မိမိလက်နက်နဲ့ အာဏာသိမ်းထားတဲ့ အဖွဲ့အစည်းမျိုးဟာအစိုးရ မမည် တဲ့အပြင် မိဘနဲ့ရော နှိုင်းသင့်ပါ သလား။
ဒါဆို အစိုးရကဘာလဲ။တိုင်းပြည်တပြည်ကို အုပ်ချုပ်တဲ့သူဆိုတော့ တိုင်းပြည်ရဲ့ ခေါင်းဆောင်အကြီးအကဲပဲပေါ့။ အကြီးအကဲဆိုတာ အကြီးအကဲကျင့်ဝတ်နဲ့အညီနေထိုင်ကျင့်သုံးရပါမယ်။ မင်းကျင့်တရား (၁၀)ပါး ခဏ ထားလို့ နာယကဂုဏ် ခြောက်ပါးနဲ့ ပြည့်စုံရမယ်မဟုတ်လား။
ထကြွ၊ နိုးကြား၊ သနား၊သည်းခံ၊ ဝေဘန်၊ထောက်ရှုဆိုတဲ့နာယကဂုဏ်ခြောက်ပါးနဲ့တောင် ပြည့်စုံအောင်ကျင့်ကြံ နေ ထိုင်ကြပါရဲ့လား။
ကျမတော့အဲဒီစာဖတ်ပြီးစိတ်ထဲ တော်တော်လေးကို ကသိကအောက်ဖြစ်မိတယ်။ဘယ့်နှယ် မနှိုင်းကောင်းနှိုင်း ကောင်း မိဘအရာဝင်ချင်သေးတယ်။ ငရဲတွေကြီး ၀မ်းစိမ်းတွေသွားကုန်ကြတော့မှာပဲ။ ဒီအတိုင်းသာဆိုခုလို လောင်စာဆီဈေးနှုန်းတက်ပေးတာတောင် ကျေးဇူးကြီးလှပါပေတယ်လို့ လက်စုံမိုးပြီး ညတိုင်း ဦးသုံးကြိမ် ပဲချ နေရမလို။
တကယ်တော့အစိုးရဆိုတာပြည်သူ့မျက်နှာ ကြည့်နေရမယ့်သူ။ ပြည်သူတွေ ဖြစ်လာသမျှအခက်အခဲအကြပ် အ တည်းကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းပေးရမယ့်သူ။ ပြည်သူလူထုမရှိဘဲ အစိုးရဆိုတာရှိမှာလား။ ဒါကို သူတို့ကပြည်သူတွေ ရဲ့ ကျေးဇူးရှင် လာလုပ်ချင်သေးတယ်။ အနန္တဂိုဏ်းဝင် ကျေးဇူးရှင်အဖြစ်သတ်မှတ်ခံချင်ရုံမက ကျေးဇူးဆပ်တာ လဲ ပြန်ခံချင်သေးတယ်။ ဖြစ်ပုံများ။ အံ့သြလို့မဆုံးဘူး။
သူပြောသလိုမိဘပဲ ထားပါတော့။မိဘသိပ်ဖြစ်ချင်နေတယ်ဆိုတော့စိတ်ကူးထဲမှာမိဘအရာခဏထားကြည့်တာ ပါ။ ဒါပေမဲ့ စဉ်းစားရမှာက တကယ့်မိဘအရင်းဆိုရင်ကိုယ်တိုင်ကရွှေပုံ စိန်ပုံပေါ်ထိုင်နေပြီး သားသမီးတွေလမ်း ဘေးရောက် ငတ်ပြတ်တာကြည့်နေမှာမဟုတ်ဘူး။ မိဘက သိန်းထောင်ကျော်တန်ကားကိုစီးပြီး သားသမီးတွေ ကုန်းကြောင်းလျှောက်နေရတာကိုဘယ်မိဘမှ ကြည့်ရက်မှာမဟုတ်ဘူး။ ကိုယ်အသုံးမကျတာကိုလည်းသားသ မီးကိုလက်ညှိုးထိုးနေမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါဆို တကယ့်မိဘအရင်း မဟုတ်တာတော့သေချာပြီ။ ဒါဆို အမေ နဲ့တကွ အမွေတွေကိုပါ မတရားသိမ်းပိုက် ယူထားတဲ့ပထွေးများဖြစ်နေမလား။ စဉ်းစားမိတာပါ။
နောက်ဆုံးတော့လည်းကျမတခါကရေးခဲ့ဖူးသလို“ဟာသအတွေး ဟာသ အမြင်”လို့သဘောထားလိုက် တာ ပဲ ခပ်ကောင်းကောင်းဆိုပြီး ရယ်ဖို့ကြိုးစားမိတယ်။ ဒါပေမဲ့ …ရယ်လို့လည်းမရတော့ အီလည်လည်နဲ့ သက်ပြင်း ကြီး သာချလိုက်မိပါရဲ့။
၂၄၊.သြဂုတ်၊ ၂၀၀၇ ၁၂ နာရီ ၃၀ မိနစ်
Posted by Ko Niknayman at 3:37 PM Links to this post
Posted by Ko Niknayman at 9:09 AM Links to this post
Posted by Ko Niknayman at 9:57 PM Links to this post
အောက်ပါတင်ပြချက်များသည်တပ်မတော်အမည်သိက္ခာနှင့် မှန်ကန်သောစေတနာဖြင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်သူ များအတွက်ဖြစ်သည်။
ယနေ့နိုင်ငံတာဝန်ကြီးမားစွာရယူထမ်းဆောင် နေကြရသောတပ်မတော် ဦးစီးပုဂ္ဂိုလ်များ၏ နိုင်ငံတော်နှင့် ပြည်သူလူထုအကျိုး ရှေ့ရှုကြိုးပမ်းရာတွင် ထိရောက်မှန်ကန်ပြီး၊ တိုင်းရင်းသား မိဘပြည်သူများ လေး စားရသော တပ်မတော်နှင့်နိုင်ငံ၏ ချစ်မြတ်နိူးရသော ခေါင်းဆောင်များအဖြစ်၊ သမိုင်းတင်ကျန်ရစ်ရန် အတွက် လေးနက်စွာ စဉ်းးစား၊ဆုံးဖြတ် လုပ်ဆောင်ပေးနိူင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။
ယနေ့ မြန်မာနိူင်ငံပြဿနာ အရပ်ရပ်အား ဖြေရှင်းကိုင်တွယ်ချဉ်းကပ်ပုံလွဲမှားနေသည်ကို နိုင်ငံတော် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြသူများ၊ တိုင်းရင်းသားညီအကိုမောင်နှမများ၊ ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အဖွဲ့ အစည်း အသီးသီးမှ ခေါင်းဆောင်များ၊ နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများ အားလုံးသိရှိ နေကြပြီးဖြစ်သည်။
သို့သော် မိမိတို့လက်ရှိဘဝရပ်တည်မှု (ရေတိုခေတ္တ အချိန်တို ခဏတာ) အတွက်အဓိကဦးစားပေးထား၍ ဘဝ နှင့် ဆန္ဒအသိတရား နှင့်လုပ်ရပ်ကွာခြားခြင်းကြီးစွာဖြင့် သန်းပေါင်းငါးဆယ်ကျော်သော နိုင်ငံသားများရေငုံနူတ် ပိတ်၍ နေ့ စဉ်ဘဝ ဖြတ်သန်း နေကြသည်။
ဤဖြစ်စဉ်၏အဓိကပြဿနာမှာ ပိတ်ဆို့တွေးခေါ်ချက်များနှင့်ပကတိရရှိထားသော အခြေအနေ ထာဝရ တည်မြဲအောင် ကြိုးစားမှ ငါ့နှင့်မိသားစု၊ ပတ်ဝန်းကျင် တိုးတက်လိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်နေကြသောအာဏာရ ပုဂ္ဂိုလ်အချို့၏ ဦီးဆောင်မှုနောက်တွင် လိုက်ပါနေကြသူများ၊ အမှန်တရားနှင့်ဖြစ် စဉ် တွက်ချက်မှု လွဲမှား စွာရှိ နေသည်ကို သတိမပြုနိူင်သေးသူတို့ ရှိနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
ယနေ့ပြည်သူ့ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုများမှာ စားဝတ်နေရေး၊ လူသားတစ်ဦးး၏ အခြေခံအကျဆုံး လိုအပ်ချက်အတွက် တောင်းဆိုနေခြင်းသာဖြစ်သည်။ ထိုကဲသို့တောင်းဆိုမှုများဖြစ်ပေါ်ရခြင်း အပေါ်အဖွဲ့အစည်း အသီးသီး ၏ သုံးသပ်တင်ပြပုံအမျိုးမျိုးကိုတွေရှိရသည်၊ ဖြေရှင်းသင့်သည်အနေအထားများစွာထဲမှ ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး သန်းရွှေ နှင့် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးမောင်အေးတို့၏ ထာဝရတဖက်သတ်ပုံသေစဉ်းစားထားသော ဖိနှိပ်ဖြေရှင်းနည်း ကိုသာအောက်ခြေတာဝန်ယူပုဂ္ဂိုလ်များမှ ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်လိုက်ခြင်းသည် တပ်မတော် ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် နိုင်ငံသူ၊ သားအကျိုးရှေ့ရှုလုပ်ဆောင်နေသော အင်အားစုခေါင်းဆောင်များအတွက် အလွန် စိတ်ထိခိုက်ရ ပါ သည်။
အမျိုးသားရေးရှုထောင့်မှတင်ပြရသော် တပ်မတော်သည် နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများနှင့် နိုင်ငံတော်အတွက် တရား မျှတသော၊နည်းလမ်းကိုသာလုပ်ဆောင်သင့်ပေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ သည် ပြဿနာများဖြေရှင်းရာတွင်၎င်း၊ အများအကျိုးအတွက် တာဝန်ယူလုပ်ဆောင်ရာတွင်၎င်း၊ ယခုကဲ့သို့ မတရားတဖက်သတ် အနိူင်ကျင့် လုပ် ဆောင် နေခြင်းမှာ မိဘပြည်သူများ၏ အလိုဆန္ဒနှင့် မျှော်လင့်ချက်များကို ဆန့်ကျင်ရာရောက်နေသည် ဟုနား လည်မိပါ သည်။
ယနေ့ နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ (န.အ.ဖ)ဥက္ကဌနှင့် ဒုဥက္ကဌ တို့၏ အားပြိုင် ဦးဆောင်နေခြင်း၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရွှေမန်း တာဝန်ပေးသမျှလုပ်ဆောင်နေခြင်း၊ (န.အ.ဖ)နိုင်ငံတော် အေးချမ်းသာယာရေး နှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီဝင်အချို့နှင့် ဝန်ကြီး ၃-၄ဦး တို့၏ ချုပ်ကိုင် လုပ်ဆောင် နေမှုများသည် တပ်မတော်၊ တိုင်းပြည် နှင့်နိုင်ငံသားများ၏ အကျိုးစီးပွား၊ အရေးကိစ္စများထက်၊ ၎င်းမိသား စုဝင်များ၊ သင့်မြတ်သောဆွေမျိုး များနှင့်ရင်းနှီးခင်မင်သော သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေလာဘ်ပေးသူ တို့အတွက်သာ တပ်မတော်သည်စတေးခံအဖြစ်၊ လူပုဂ္ဂိုလ်အချို့ အတွက် တပ်မတော်၏ အမည်နှင့်ဂုဏ်သိက္ခာ အလွဲသုံးစား ချခံနေရပါသည်။
ထို့ အတွက်ကြောင့်ဆွေးနွေးညှိနိူင်းမှုများ အမှန်အမြန် ဖြစ်ထွန်းစေရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ အာဏာရှင်(အလွဲသုံးစား ပြုသူများ) လူတစ်စုအဆုံးသတ်ရေး၊ ပြည်သူနှင်တသားတည်း ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရေး၊ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ တိုင်း ရင်းသားခေါင်းဆောင်များ၊ အနိုင်ရပါတီခေါင်းဆောင်များ၊ ပြည်သူလူထုခေါင်းဆောင်များ နှင့် အတူတကွ တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးနိူင်ရေးအတွက် တပ်မတော်ဦးစီးဦးဆောင်သူများအနေဖြင့် ပြည်သူနှင့်အမှန်တရား ဘက်မှ ရပ်တည်ရန် အချိန်ကျရောက်နေပြီဟု သတိပေးတင်ပြလိုက်ပါသည်။
Posted by Ko Niknayman at 9:55 PM Links to this post
လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသော မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဖြစ်ပေါ်နေသောလူထုတိုက်ပွဲများအပေါ် မကဒတ. အရေးပေါ် သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်
နအဖစစ်အုပ်စု. ပြည်သူအချင်းချင်း စစ်ခင်းခိုင်းသည့် ယုတ်မာပက်စက်သော ကြံစည် လုပ်ဆောင်ချက် များကို ပခုက္ကူ နှင့် နိုင်ငံတ၀ှမ်း ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြတုန့် ပြန်တိုက်ပွဲဝင်မှုများက နအဖ စစ်အာဏာရှင်တို့ အား အမိအရ ခြိမ်းခြောက်နေပြီဖြစ်သည်ဟု မကဒတ မှ သိမြင်သည်။
ထိုဆုံစည်းမှုများမှ ဖြစ်ပေါ်လာမည့် အထွေထွေလူထု လှုပ်ရှားမှုကြီးသည် စစ်အာဏာရှင် စနစ်နှင့်၎င်းတို့့လက်ကိုင် တုတ်များ. အတားအဆီးမှန်သမျှကို ရိုက်ချိုးဖျက်သိမ်းသွားမည့် အင်အားကြီးပင်ဖြစ်သည်၊
ပြည်သူအမည်ခံ ကြံ့ ဖွတ်နှင့် စွမ်းအားရှင်တို့ အားတုန့် ပြန်တိုက်ပွဲဝင်မှုမှာအကြမ်းဖက် လုပ်ရပ်များ၊ နိုင်ငံတော်အားမတည်မငြိမ်ဖြစ်အောင်ဆူပူလုပ်ဆောင်နေမှုများ မဟုတ်ဘဲလူထု အရေးတော်ပုံကြီးတရပ်ပေါ်ပေါက်ဆင်နွဲတော့မည့်လက္ခဏာကောင်းများပင်ဖြစ်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့မကဒတမှယုံကြည်ပေသည်၊
အထူးသဖြင့် ပန်ကြားလိုသည်မှာ ကြံ့ ဖွတ်နှင့် စွမ်းအားရှင် အမည်ခံပြည်သူတို့ အနေ ဖြင့် နအ ဖ စစ် အုပ်စု အ သုံးချမှုကို နားလည် သိရှိပြီး တဒင်္ဂခံစားရမှုများအတွက် ကိုယ်ကျိုးမကြည့်ဘဲ တိုင်းပြည်အနာဂတ်ရေးကို ရှေ့ရှု ပြီး မှန်မှန်ကန်ကန်ရပ်တည်ရှောင်လွှဲ သင့်သည်၊
သို့ မဟုတ်ပါကပခုက္ကူမြို့ ကြံ့ ဖွတ်အတွင်းရေးမှူးနှင့် စွမ်းအားရှင် ဥက္ကဌတို့ ဖြစ်ရပ်များကဲ့ သို့့ ရင်ဆိုင်ရမည် ဖြစ်သည်၊
မဒကတ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ရဲဘော်ဆန်နီမှလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသည့် လူထုတိုက်ပွဲများအပေါ် အောက်ပါ အတိုင်း သုံးသပ် ပြောဆိုလိုက်ပါသည်၊
“ယနေ့မြန်မာပြည်တွင်းမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ လူထုဆန္ဒပြမှုများဟာ တရားမျှတမှုရှိပြီး သမိုင်း လိုအပ်ချက် လည်း ဖြစ်ပါတယ်၊ ဒါကို စစ်အုပ်စုက မှန်မှန်ကန်ကန် မဖြေရှင်းပေးဘဲ အခုလို အကြမ်းဖက်နှိပ်ကွပ်နေရင် လူထုကသူ တို့ လိုလားချက်ပန်းတိုင်ကို ရောက်တဲ့အထိ အတားအဆီး မှန်သမျှကို ရိုက်ချိုး ချီတက်သွားမှာဖြစ်တယ်၊ ဒါဟာ မည်သည့် လူမှုတော်လှန်ရေး သမိုင်းမှာမဆို ဖြစ်ခဲ့တယ်၊ နောင်ကိုလည်းဖြစ်နေဦးမယ့် သမိုင်းရဲ့ အမှန်တရားပဲ ဖြစ်ပါတယ်”
နိုင်ငံတ၀ှမ်းရှိ ရဟန်းသံဃာတော်များနှင့် ပြည်သူလူထုကြီးအား ပန်ကြားလိုသည်မှာ နအဖ စစ် အုပ် စု နှင့် စစ် အာဏာရှင်စနစ်အား ပြတ်ပြတ်သားသားဆန့် ကျင်တိုက်ပွဲဝင်ချေမှုန်း သွားကြပါရန် ပန်ကြားလိုက်ပါသည်၊
Posted by Ko Niknayman at 12:41 PM Links to this post
မနီလာသိန်းရဲ့ အင်တာဗျူးကို နားထောင်ပြီး ဒီပန်ကြားချက်ကို ကျမ ရေးဖြစ်တာပါ။ ၄လအရွယ် သမီးငယ်လေး နဲ့ ခွဲခွာနေရတဲ့ ဘ၀၊ နို့တိုက်ရမဲ့အချိန်မှာ နို့မတိုက်ရဘဲ နို့တင်းတဲ့ဒါဏ်ကို ခံစားနေရတဲ့ ဘ၀၊ တချိန်လုံး ရှောင် တိမ်းနေရပြီး ညကြီးမိုးချုပ်တောင် အိမ်ပေါ်မတက်နိုင်ဘဲ လျှောက်သွားနေရတဲ့ ဘ၀၊ စိတ်တထင့်ထင့်နဲ့ နေနေ ရတဲ့ ဘ၀၊ ဘယ်လောက်များ ဒုက္ခကြီးလိုက်သလဲနော်။
ဒီအချိန်ဟာ သွေးနုသားနု မိန်းမတယောက်အဖို့ စိုးရိမ်စိတ်တွေ ကင်းဝေးပြီး အေးအေးချမ်းချမ်း နေနေရမဲ့အ ချိန်ပါ။ သမီးလေးဟာလဲ မိခင်နို့ကို အပြည့်အ၀ သောက်သုံးပြီး မိခင်နဲ့ နွေးနွေးထွေးထွေး ရှိနေရမဲ့ အရွယ်ပါ။
မနီလာသိန်းဟာ ကလေးမွေးထားတာ မကြာသေးတဲ့ မိခင်တယောက်ပါ။ ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးပြီး အရာရာ ချွတ်ခြုံ ကျနေတဲ့ ကျမတို့ပြည်သူတွေ ခံစား နေရတဲ့ ဒုက္ခတွေကို အုပ်ချုပ်တဲ့ မင်းအစိုးရများ သိအောင် သွေးနုသားနု မိန်းမသားတယောက်ဟာ ပြည်သူတွေရဲ့ကိုယ်စား ငြိမ်းချမ်းစွာ လမ်းလျှောက် ဆန္ဒပြခဲ့တာပါ။
အဲဒီလိုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက် မင်းအစိုးရတွေဟာ လူမိုက်တွေကို ငွေကြေးများ ပေးကမ်းပြီး သွေးနုသားနု မိန်းမတ ယောက်ကို ဖမ်းဆီးနိုင်ဘို့ အငြိုးအတေးကြီးကြီးနဲ့ ကြိုးစားနေပါတော့တယ်။ နို့ဆာနေရှာတဲ့ သမီးငယ်လေးကို တည်ကြက်လုပ်ပြီး စစ်မြေပြင်မှာ ကင်းပုန်းဝပ်သလို နေ့ရော ညပါ စောင့်ကြည့် နေကြပါတယ်။ တခြား နေရာ တွေမှာလဲ ပိုက်စိပ်တိုက်လိုက်ပြီး အကြီးအကျယ်ကို ရှာဖွေမှုတွေ လုပ်နေပါတယ်။
ကျမတို့ပြည်သူတွေ တကယ်ဘဲ ဒုက္ခရောက်နေကြတာပါ။ ထမင်းကိုနပ်မှန်အောင် မစားနိုင်သူတွေ များလာပြီး အာဟာရချို့တဲ့ တဲ့ ကလေးတွေလဲ များလာနေပါတယ်။ ဘယ်လောက်များ ဆင်းရဲဒုက္ခ ရောက်နေကြလဲဆိုရင် အခု အကြမ်းဖက်နေတဲ့ လူတွေကို ကြည့်ရင်ဘဲ သိနိုင်ပါတယ်။ ဘ၀မှာ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး ကျဉ်းမြောင်း ကျပ် တည်း လွန်းအားကြီးတော့ ဗဟု သုတတွေ အားနည်း၊ အတွေးအခေါ်တွေ အားနည်းပြီး သူများကို ရိုက်ပုတ် ညှင်းဆဲ ပြီးမှရတဲ့ ထမင်းတလုတ်ကို စားနိုင်လာကြတာပါဘဲ။ သိတ်ငတ်လာတဲ့အခါမှာ လူတွေဟာ အကျင့် စာရိတ္တတွေ ပျက်စီးလာပြီး လူလူချင်း ခေါင်းပုံဖြတ်တာ၊ စာနာမှု ကင်းမဲ့ လာကြပါတယ်။
တိုင်းပြည်တခုမှာ အုပ်ချုပ်သူအစိုးရ ဆိုတာကို ကျမ ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ နားလည်တာက မိဘနေရာ ကနေ၊ ပြည်သူတွေကို ရင်ဝယ်သားလို စောင့်ရှောက်ဘို့၊ အကာအကွယ်ပေးဘို့ အတွက်ရပ်တည်နေတာလို့ နားလည်ပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ အခု အစိုးရက လူမိုက်တွေ မွေးပြီး ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြနေတဲ့ ပြည်သူတွေကို ဆဲဆို ရိုက်နှက် ဖမ်းဆီးခိုင်းနေတာဟာ တော်တော် အံ့သြစရာ ကောင်းပါတယ်။ ရက်စက်ယုတ်မာတဲ့ အစိုးရ၊အောက် တန်းကျတဲ့ အစိုးရလို့ ကျမ မြင်မိပါတယ်။ တွေးလေ အော့နှလုံးနာလေ ပါဘဲ၊ မယုံနိုင်အောင်လည်း ဖြစ်မိပါ တယ်။
အခုဆိုရင် ၄ လသား အရွယ်ကလေးငယ်လေးရဲ့ မိခင်တယောက်၊ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ကိုယ်စား ငြိမ်းချမ်းစွာ လမ်းလျှောက် ဆန္ဒပြခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီးတယောက်ကို အမဲလိုက်သလို လိုက်နေတာဟာ ကျမတော့ ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ တကယ်ကို အံ့သြမိပါတယ်။
ကျမတို့ မြန်မာပြည်ဟာ တကယ့်ကို ဒုစရိုက်တွေ လွှမ်းမိုးနေတဲ့ မင်းမဲ့တိုင်းပြည် ဖြစ်နေပါပြီ။ အကာအကွယ်မဲ့၊ ခိုကိုးရာမဲ့ ဘ၀ကို ရောက်နေရပါပြီ၊၊ ဒီ အစိုးရဟာ ကျမတို့ပြည်သူတွေကို ဘာမှ မစဉ်းစားနိုင်အောင်၊ ဘာမှ မဝေဖန်နိုင်အောင် ၊ လူအချင်းချင်း လေးစားချစ်ခင်တာတွေ ပပျောက်အောင်၊ အကြောက်တရားတွေ လွှမ်း မိုးနေအောင် လုပ်နေတယ်လို့ ခံစားမိ ပါတယ်။ အစိုးရကိုလဲ အစိုးရအဖြစ် မမြင်နိုင်တော့ဘဲ ရူးနေတဲ့လူတွေ လို့ ဘဲ မြင်မိပါတော့တယ်။
ပြည်သူတွေ မြင်အောင် ကြည့်ကြပါ။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရော၊ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာရော လူတွေ ငတ်နေကြပါပြီ။ အဲဒီ အငတ် ဘေးကနေ နောက်ဆက်တွဲ အဖြစ်ဆိုးတွေ အများကြီး ဖြစ်လာနေပါပြီ။
ကိုယ့်ပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့အပေါ် ဒီလောက် ရက်စက်ယုတ်မာတဲ့ အောက်တန်းကျတဲ့ လူတစုကို ဖယ်ပစ်နိုင် မှ ဒီ အဖြစ် ဆိုးကြီး၊ ဒီဘ၀ဆိုးကြီးကနေလွတ်ကင်း နိုင်မှာပါ။ အဲဒီလို လွတ်ကင်းနိုင်ဘို့ ဆိုတာကလဲ မြန်မာ ပြည်ကြီးကို ချစ်တဲ့၊ မြန်မာပြည်သားတွေကို ချစ်တဲ့ ကျမတို့ ပြည်သူတွေကဘဲ အဓိက ပါဝင်ကြမှဖြစ်မှာပါ။
ကျမတို့ရဲ့ ဘ၀က ကြောက်လေ ပိုဆိုးလေ ဖြစ်တော့မှာပါ။ ဒါကြောင့် ကိုယ်နိုင်တဲ့အားနဲ့ ပြည်သူတွေအတွက် ကိုယ်ကျိုးစွန့် အနစ်နာခံ ဆောင်ရွက်နေတဲ့၊ တိမ်းရှောင်နေနေရတဲ့ လူတွေကို ကူညီကြပါ၊ စောင့်ရှောက်ပေးကြပါ၊ ပြည်သူအားလုံး ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ ပါဝင်ပေးကြပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံပါရစေ။
Posted by Ko Niknayman at 8:08 AM Links to this post
Posted by Ko Niknayman at 6:41 AM Links to this post
ပခုက္ကူမြို့့နှင့်နိုင်ငံတ၀ှမ်း အုံကြွလှုပ်ရှားလျက်ရှိသော သံဃာတော်များဦးဆောင်နေသည့် လူထု တိုက်ပွဲများ အပေါ် မကဒတ . ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်
၁။ စက်တင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့ နှင့် ၆ ရက်နေ့ များတွင် ပခုက္ကူမြို့ အုံကြွလှုပ်ရှားမှုများ ကို နအဖ စစ်အုပ်စု.လက်ကိုင်တုတ် များက မတရား ဖိနှိပ်ရက်စက် ဖြိုခွင်းမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသော်လည်း သံဃာတော်များ နှင့် လူထု တရပ်လုံးမှ တုန့် ပြန်လှုပ်ရှား တိုက်ပွဲဝင်နေမှု များကို မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသား များ ဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး (မကဒတ)မှ အပြည့်အ၀ ထောက်ခံ အားပေးလိုက်သည်။
၂။ အလားတူ နိုင်ငံတ၀ှမ်း လှုပ်ရှားတိုက်ပွဲဝင်နေသူများအားလုံးကိုလည်း တနိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် စုစည်း နိုင်စေရန် ကြိုးပမ်းကြစေလိုပါသည်။
၃။ ယနေ့ ကာလသည် မြန်မာနိုင်ငံတ၀ှမ်း လှည်းနေလှေအောင်း မြင်းဇောင်းမကျန် ပြည်သူတရပ်လုံး ပါဝင် ဆင်နွဲရမည့် စစ်အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေး လူထုတိုက်ပွဲကြီးပင်ဖြစ်သည်။
၄။ နိုင်ငံတ၀ှမ်းလုံးရှိ သံဃာတော်များ။ ကျောင်းသားလူငယ်များနှင့် ပြည်သူလူထုတရပ်လုံးအား မကဒတ ဥက္ကဌ ရဲဘော်သံခဲမှ ယခုကဲ့သို့ ပန်ကြားလိုက်ပါသည်။
“ဆရာတော်ကြီးများ၊ သံဃာတော်များ၊ ကျောင်းသားလူငယ်တွေနဲ့ပြည်သူများအားလုံးခင်ဗျား - ဒီကနေ့ဒီအ ချိန်မှာ တနိုင်ငံလုံး အစွမ်းကုန် စုစည်းညီညွတ်ပြီး တိုက်ပွဲဝင်ကြပါ၊ ကျနော်တို့မကဒတ အနေနဲ့ လည်း ကျရာ နေရာကနေ လက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်သွားဖို့အဆင်သင့်ရှိနေတယ်ဆိုတာကို လျှောက်ထား ပန်ကြားလိုပါတယ်”
၅။ မကဒတ အနေဖြင့် နိုင်ငံတ၀ှမ်း လူထုတိုက်ပွဲကြီး အရှိန်မြှင့်ဆင်နွဲသွားကြရန် နည်းလမ်းပေါင်းစုံဖြင့် ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်နေကြောင်း ဖော်ပြရင်း ယခုကြေညာချက်ကို ထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်၊
ရက်စွဲ၊ ၊ ၂၀၀၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၆ ရက်
Posted by Ko Niknayman at 1:33 PM Links to this post
မနက် (၁၁း၁၅)ခန့်တွင်..မြ်ို့ နယ်စည်းရုံးရေး တွဲ /မှူး ဦးခင်မောင်ချစ် ကို မ.ရ.က ရုံးခန်းမှ ခေါ်ခိုင်းသည်ဆို၍ လာခေါ်သောဒိုင်နာကား ကိုပြည်သူလူထုမှအော်ဟစ် မောင်းနှင်ထုတ် သောကြောင့်ကားမှာပြန်သွားရပါသည်။ တရားပွဲကိုဆက်လက် ပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီး ကုန်ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်နေမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ”ယခုလိုကုန်ဈေးနှုန်းကြီးမြှင့် နေတာကိုကျမတို့တင်ခံနေရတာမဟူတ်ပါဘူး။ပြည်သူတရပ်လုံးခံနေကြရတာပါ။င်္ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူတွေထဲကဘာတွေများပြောစရာရှိပါသလည်း“လို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့အခါ။လူထုအတွင်းမှအိမ်ရှင်မ တဦးကနေ၍ “ကုန်ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်နေမှုကြောင့် ကျွန်မတို့ အိမ်ရှင်မတွေ ပြဿနာတက်နေတယ်” ဟုဆွေးနွေးဟောပြောခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။
Posted by Ko Niknayman at 12:55 PM Links to this post
Posted by Ko Niknayman at 3:08 PM Links to this post
Posted by Ko Niknayman at 3:19 AM Links to this post